I-Carpet Cleaner (4) Factory - China Carpet Cleaner (4) Abenzi, abahlinzeki
Isihlungi seKhabethe Esithathu-esisodwa - I-DTJ3A / DTJ4A (Amanzi Abanda Namanzi Ashisayo)
Umshini wokuhlanza ukhaphethi kathathu ngamunye ufafaza isihlanza ukhaphethi ophansi kanye namanzi kukhaphethi ngenjini yokufafaza amanzi nangemibhobho yefeni yenkungu. Ngasikhathi sinye, i-roller brush motor ishayela ibhulashi le-roller ukuzungeza ngejubane elikhulu, idlulisa ukungcola empandeni yekhaphethi nge-Dissolve yokuhlanza, uyihlanze, uxubha ukhaphethi nge-roller roller, bese ekugcineni umunce indle ngokusebenzisa amandla amakhulu okuncela amandla.
20L / 30L / 40L Carpet Acashile LC-20SC, LC-30SC, LC-40SC
Uchungechunge lwe-LC Carpet cleaner njengomshini ongasetshenziswa ukuzama ukugeza nokuhlanzeka, futhi ungasetshenziselwa ukuhlanza ukhaphethi. Lapho uhlanza ukhaphethi, ufafaza, ugeza futhi womisa inqubo engu-3 uma kuqedile ngasikhathi sinye okwenza ukhaphethi uhlanzeke nakancane. Umklamo womzimba uyinoveli futhi uyimfashini, usebenzisa okuguquguqukayo nokusebenzekayo, ikakhulukazi efanelekile ephaseji, ihholo lenkomfa, indawo yokudlela njll izindawo zokuhlanza ukhaphethi.
60L / 80L Carpet Acashile LC-60SC, LC-80SC
Umshini ufakwe isethi ephelele yezesekeli zokuhlanza, ezingaba manzi futhi zome ukukhipha ngokuxhuma izingxenye ezahlukahlukene zokufinyelela.
Umshini Wokususa Ukhaphethi –DTJ1A / DTJ1AR (Amanzi abandayo namanzi ashisayo)
Izici Ngenisa imoto, isiqinisekiso sekhwalithi. Ngaphakathi ethangini lamanzi, khulisa okokuhlunga okungavimbeli isihlungi. Ipayipi lokudonsa elingaphandle elingu-7.5m kanye nokumunca amanzi, lenza likwazi ukuhlanza ngamamitha ayi-7.5. Amakhethini ama-sucker (ngokuzithandela) asebenza emshinini owodwa, elula kakhulu, asikho isidingo sokususa ikhethini noma ikhava yesofa ekuwashweni, ugeze ngenkungu yamanzi bese u-80% womile ngesikhathi esifushane. I-DTJ1AR uhlobo lwamanzi abandayo futhi ashisayo. Into Yobuchwepheshe Idatha DTJ1A Voltage / Imvamisa 220V-240V / 50Hz Amandla 3230W Okwamanje ...
Three-in-one Sofa Acashile-SC730
Usofa wuhlobo lwefenisha oluvame kakhulu esakhiweni, kanti futhi yiyona esetshenziswa kakhulu. Lokhu kuholela ekutheni ibulawe kalula futhi idinga ukuhlanzwa njalo futhi ingadabuki usofa.